Asam-pitsarana : Hilofosana ny fanadiovana sy ny fanatsarana
Mazava ny tanjona. Himasoana ny fanadiovana sy fanatsarana ny asam-pitsarana. Antso avo no atao amin’ireo izay mbola mitady tsy hanaiky ny fanavaozana. Mila vokatra hita maso sy azo tsapain-tanana ny asa fanompoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hisy ny fanampiana ireo fitaovana sy fanohanana isan-tsokajiny hahatomombana izany.
Nivoitra ireo tanaty lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, tao aorian’ny fanangana-tsaina natao teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, androany Alatsinainy 30 Aogositra 2021. Toromarika hentitra no nomeny ireo mpiara-miasa tsy an-kanavaka.
Fitsarana misokatra amin’ny vahoaka : Ilaina ny fahatokisan’ny besinimaro
Published Date: 29 août 2021
Tongotra mby an-dakana, ka tsy miverina intsony. Anaty Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fisokafan’ny Fitsarana amin’ny vahoaka. Porofo hita maso sy azo tsapain-tanana ny ezaka atao eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Ilaina kosa nefa ny fahatokisan’ny vahoaka. Tsy honohono intsony ny ady amin’ny kolikoly sy ny fandalàna ny mangarahara. Nivoitra ireo nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety natao tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra androany Sabotsy 28 Aogositra 2021.
Nitarika izany ny Mpitahiry ny Fitombon-kasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza. Nanotrona azy ny Tale Jeneralin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG) Atoa RAMAROLAHIHAINGONIRAINY sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana Atoa BARAKA Jean Arnaud. Tsy niompana fotsiny tamin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG ny valan-dresaka, fa nisy ihany koa ireo teboka vitsivitsy hafa. Tahaka ny fanenjehana olo-malaza iray nitranga tany Frantsa.